चाकडीको चास्नीमा डुबेका युवराजले देख्न थाले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना !:: Naya Nepal
चाकडीको चास्नीमा डुबेका युवराजले देख्न थाले प्रधानमन्त्री बन्ने सपना !
काठमाडौ । यो सामाजिक सञ्जालतिर गरिएको आलोचना वा बद्ख्वाइँ मात्र हैन, मान्छेमा सवार हुने डरलाग्दो महत्वाकांक्षाको प्रतिबिम्ब पनि हो। डा।युवराज खतिवडा अमेरिकाका लागि राजदूतमा प्रस्तावित भएपछि अधिकांश असन्तुष्ट मानिसले उनलाई गाली हैन बरु विभिन्न शैलीमा व्यंग्य गरेका छन्।
डा।खतिवडाले केही कर्मचारीसँग गरेको एउटा कुराकानीले यस्तै बुझाउँछ। यो खबर बुधबार प्रकाशित जनआस्था साप्ताहिकले छापेको छ। ‘
कहिल्यै राजनीति नगरेका खिलराज रेग्मी पनि मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षका नाममा प्रधानमन्त्री नै भएका होइनन् ररु के त्यस्तो परिस्थिति फेरि आउँदैन ररु’ उनका ज्वाइँ डा।रामशरण खरेलले आफूलाई जिस्क्याउनेहरुको राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा बसेर यसरी प्रतिवाद गर्न थालेका हुन्।
हो पनि, नेपालमा चाकडी संस्कृतिको पक्षपोषण गर्नेहरुले कहाँ, कतिबेला, के पाउँछन्– भन्नै सकिँदैन । डा।खतिवडा पनि माधव नेपाललाई कन्याएर गभर्नर भए अनि केपी ओलीलाई ‘महान राष्ट्रवादी राजनेता’ जस्ता पदावली प्रयोग गर्दै नजिकिए, प्रधानमन्त्रीसम्म हुने सपना साँच्न भ्याइसके।
नेपालको राजनीतिक क्षितिजमा यस्ता गैरराजनीतिक मानिसहरुको चलखेल र चाकडीको श्रृंखला नयाँ होइन। भोजराज घिमिरे मुख्यसचिव हुँदा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए। फाइल च्यापेर एक साँझ भोजराज बालुवाटार पुग्नासाथ बत्ति गयो । अनि, प्रचण्डलाई ‘हेर्नु त सिएम, तपाईंको शासन सफल हुन नदिन कस्तो षड्यन्त्र गरेका’ भन्दै उकास्न थाले । एकैछिनमा बत्ति आयो । भोजराजले बोली फेरे, ‘ल, हेर्नु त, वाइसिएलले ठोक्लान् भनेर बत्ति दिइहाले !’
चाकडीवाजहरु प्रधानमन्त्रीलाई दुई मीनेटभित्र दुई किसिमका कुरा गरेर खुशी पार्न कति माहिर हुन्छन्, दूतावास हुँदै नभएको क्यानाडामा कसरी राजदूत पद उछिट्याउँछन्– यही घटनाबाट बुझ्न सकिन्छ।
चाकडीवाजहरु पहिला–पहिला कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई किशुनजी र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘गिरिजाबाबु’ नै भन्थे । पछि सुशीलदा पनि भन्न भ्याए । देशका प्रधानमन्त्रीलाई कर्मचारीहरुले ‘सम्माननीयज्यू’ वा ‘प्रधानमन्त्रीज्यू’ भन्नुलाई स्वाभाविक मान्नुपर्छ। प्रचण्डको ‘सिएम’, अर्थात् ‘चेयरमेन’ पद देशको हैन, पार्टीको मात्रै हो।
अनि केपी ओलीलाई ‘बा’ भन्नु परिवारका केही सदस्यको आदरार्थी संबोधन होला । तर व्यापारी दिपक भट्टहरुबाट यही थेगो उच्चारण हुनेगर्छ । भोजराज पार्टीका कार्यकर्ता थिएनन्, देशको कर्मचारीतन्त्रका उच्च ओहोदाधारी व्यक्ति थिए। गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई ‘गिरिजाबाबु’ को संबोधन अनौपचारिक हो । तर, औपचारिक दर्जाका मान्छेहरुले अनौपचारिक संबोधन गर्नु चाकडीको पराकाष्टा हो।
प्रधानमन्त्री ज्यू हिजो-आज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ : अभिनेत्री ऋचा शर्मा
शुक्रबार २३ असोज, २०७७
काठमाडौं । पछिल्लो समय देशमा बढ्दै गएका महिला र बालिकामाथी पुरुषहरुद्धारा भइरहेका दु’श्क’र्मका घटनालाई लिएर अभिनेत्री ऋचा शर्माले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिठी लेख्नु भएको छ । देशमा घटना बढेका भन्दै आफ्नो फेसबुकमार्फत् प्रधानमन्त्रीलाई चिठी लेख्नु भएको हो ।
गत साता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्ता घटनाका बारेमा दिएको अभिव्यक्ति विवादमा आएको थियो । धेरैले आपत्ति जनाएको उनको अभिव्यक्ति गैरजिम्मेवार भएको भन्दै ऋचाले पनि सामाजिक सञ्जालमा थापा र अघिल्ला मन्त्री तथा राजनीतिज्ञका गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिको हिसाबकिताब जनताले राखिरहेको भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।
मन्त्री थापाले यस्ता घटना नेपालमा मात्रै नभएको भन्दै आत्तिनुपर्ने कारण नभएको बताउनु भएको थियो । अभिनेत्री शर्माले एक आम नेपाली नारीका रुपमा लेखेको पत्र यस्तो रहेको छः
एउटा अभिनेत्री बाहेक, यो देशलाई माया गर्ने चेली, एउटा नारी भएकोले हिजोआज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ डर लाग्न थालेको छ, मन आत्तिन थालेको छ। ती अबोध बालिकाहरूको कल्पना मात्रैले पनि छाती पोलेर आउँछ। मलाई भोलीको दिनमा मेरो छोरी जन्मिएला भन्ने डर लाग्न थालेको छ ।
मलाई छोरीको लागि सुरक्षित ठाउँ बनाउन नसकुला कि भन्ने डर लाग्न थालेको छ । मलाई भोली छोरा पाउन नि डर लाग्न थालेको छ । मैले जति सँस्कार र अनुशासन सिकाउन खोजे पनि,यो देश र यहाँको कानूनले केहि नगर्ने रहेछ भन्ने मनस्थितिमा हुर्किन्छ कि भन्ने पीर पर्न थालेको छ ।
दिनहुँ स–साना नाबालकहरुलाई पनि (दु’श्क’र्मगर्नेहरु) या त खुलेआम हिडेको या ढाकछोपले सामान्य जरिवाना र गन्न मिल्ने जेलका दिनहरु बिताएको देख्दा, एउटा नारी भएको हिजोआज आफैलाई लाज लाग्न थालेको छ । जून देशमा नारीलाई पुजिन्छ, जून देशमा सम्माननीय राष्ट्रपति स्वयं एक महिला हुनुहुन्छ, त्यस देशमा यस्तो, कानुन कार्यान्वयनक निकायहरूले यति सामान्य लिएको देख्दा हामी अझै सीताले अग्नि परिक्षा दिएको युगमै छौ झै लाग्छ।
हामी टेक्नोलोजीले चाहि विकसित भयौ तर अफसोस सोचले अझै पिछडिएका छौ । यहाँ बालिकाहरुलाइ सम्म खुलेआम यस्तो गरिहँदा, हामी कठैबरा मात्र भएका छौ । जनताको नभए पनि एकचोटी परिवारमा छोरी–नातिनीको आँखामा आँखा जुधाइ भनि हेर्नुस, की यो देशमा उनीहरु सुरक्षित छन ? म सरकारमा विश्वास राख्ने मान्छे, हिजोआज मेरा पैताला डगमगाउदैछन। बाँकी तपाईहरु बुझ्ने की